पोखरामा डेंगुको त्रास, एक सातामा २१ संक्रमित – Health Post Nepal
पोखरामा डेंगुको त्रास, एक सातामा २१ संक्रमित
२०७६ साउन २७ गते १२:१९
पोखराको मुख्य बजार क्षेत्रमा डेंगु रोगका बिरामी भेटिएपछि यसको प्रकोप फैलिने खतरा बढेको छ । पछिल्लो एक सातामा २१ जनामा डेंगु पोजिटिभ पाइएको छ । स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकीका अनुसार पोखरा–८ शिवालयचोकका एक व्यक्तिमा डेंगुको संक्रमण देखिएपछि गरिएको जाँचमा २१ जनामा संक्रमण भेटिएको हो ।
सबैभन्दा धेरै पोखरा–८ मा ८ जनामा डेंगुको संक्रमण भेटिएको छ । त्यसैगरी, वटा ९ मा ५ जना, वडा ४, १०, १७ र २५ मा एक–एकजना संक्रमित भेटिएका छन् । यस्तै, ४ जना बिरामी बाहिरबाट संक्रमित भएर आएको बनइएको छ । संक्रमितमध्ये गण्डकी मेडिकल कलेज (जिएमसी)मा ८, फेवा सिटीमा ८, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा १ र अन्य अस्पतालमा ४ जनाको उपचार भइरहेको छ । उपचाररत डेंगु संक्रमित बिरामीको नियमित अनुगमन गरिएको छ ।
पोखरामा गत वर्ष डेंगुको टाइप २ भाइरस देखिएको थियो । अहिले उनीहरुको रगतको सेरोटाइप जाँचका लागि काठमाडौं पठाइएको छ । ‘डेंगुमा टाइप १ देखि टाइप ४ सम्मका भाइरस हुन्छन् । टाइप १ र २ नर्मल हुन्छन् भने टाइप ३ र ४ खतरनाक हुन्छन्,’ निर्देशनालयका डा. भोजराज गौतमले भने, ‘डेंगु नियन्त्रणको प्रमुख उपाय लामखुट्टेको लार्भा र प्युपा बस्ने वासस्थान नष्ट गर्ने नै हो ।’
एडिस एजिप्टाई जातको पोथी लामखुट्टेको टोकाइबाट डेंगु मानिसमा सर्ने गर्छ । यो जातको लामखुट्टेले दिनमा मात्र टोक्ने गर्छ । ‘भाइरसबाट सर्ने यो रोगको खोप तथा खास उपचार छैन,’ डा. गौतमले भने, ‘आफ्नै सरसफाइमार्फत लामखुट्टे धपाउने हो ।’
डेंगुको संक्रमणपछि स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकीले सरकारी तथा निजी अस्पतालबाट प्रत्येक दिन त्यस्ता रोगीको तथ्यांक लिने र लामखुट्टे धपाउने अभियान सुरु गरिसकेको छ । निर्देशनालयका निर्देशक खिमबहादुर खड्काले शुक्रबारदेखि नै पोखरा नगर क्षेत्रमा लामखुट्टेको वासस्थान खोजी गर्ने, नष्ट गर्ने र सचेतना अभियान सुरु गरेको छ । यसका लागि मणिपाल शिक्षण अस्पताल र गण्डकी मेडिकल कलेज (जिएमसी) का मेडिकल अध्ययनरत विद्यार्थीसहितको टोलीले शुक्रबार वडा ८ र ९ मा लामखुट्टेको वासस्थान खोजी र नष्ट गर्ने कार्यक्रम चलाएका छन् । अघिल्लो आइतबार यसबारे सचेतना र्याली निकालिएको थियो ।